တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး သေချာ နားလည် အောင် ဘယ်လို လုပ် ကြမလဲ။ ပြောင်းလဲခြင်း များစွာ နှင့် တစ် ရှိန် ထိုး တိုးတက် နေသော စီးပွားရေး လောက တွင် …. ကိုယ့် အတွေးများထင်မြင်ချက်များကို ကိုယ့် ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ၊ သက်ဆိုင်သူများ နားလည်...
How do I becomeavaluable team player?
ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိသော အသင်းအဖွဲ့သား (ဝိုင်းတော်သား) တစ်ဦး ဖြစ်လာစေရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၍ အလွန် အခရာကျပါသည်။သင်ဟာ မိမိကိုယ်ကို ထိပ်တန်းစီးပွားရေး စီမံကိန်းများမှ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင...